ပုံစံလုပ်ရန်ဘုရားမဲ့ဝါဒအပေါ်အဘိဓါနျ, ဘုရားမဲ့ဝါဒီ, Freethinkers နှင့်အခြားသူများ
ယင်းနှင့် ပတ်သက်. အချို့သဘောမတူ, ကံမကောင်းရှိပါတယ် ဘုရားမဲ့ဝါဒ၏အဓိပ်ပါယျ ။ ထိုသို့သဘောထားကွဲလွဲအများစု theists ထံမှလာသည်ဟုမှတ်သားဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည် - ဘုရားမဲ့ဝါဒီသူတို့ကိုယ်သူတို့အဘယ်အရာကိုဘုရားမဲ့ဝါဒနည်းလမ်းများအပေါ်သဘောတူရန်လေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အငြင်းပွားမှုခရစ်ယာန်ဘုရားမဲ့ဝါဒီအသုံးပြုသောအဓိပ္ပါယ်နှင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုသည်ကြောင်းအပြင်းအထန်တောင်းဆို။
ဘုရားမဲ့ဝါဒီကြားတွင်ဘုရားမဲ့ဝါဒ၏ကျယ်ပြန့်နှင့်ထို့ထက် ပို. ဘုံ, နားလည်မှုအတော်လေးရိုးရှင်းစွာ "ဆိုသောဘုရားတို့ကိုယုံကြည်သောမဟုတ်ပါဘူး။ " ဖြစ်ပါတယ် တောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့ဗီဇာငြင်းဆိုမှုအဘယ်သူမျှမထားကြပါတယ် - ဘုရားမဲ့ဝါဒီတစ်ဦး theist ဖြစ်ဖြစ်ပျက်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံဒီကျယ်ပြန့်နားလည်မှု "အားနည်း" သို့မဟုတ် "သွယ်ဝိုက်" ဘုရားမဲ့ဝါဒ 'ဟုဆိုအပ်၏။ အများစုကအကောင်း, ပြည့်စုံအဘိဓါနျအလှယျတကူဒီထောကျပံ့ပေး။
ထို့အပြင်တခါတရံ "အားကြီးသော" သို့မဟုတ် "အကဲဆတ်သော" ဘုရားမဲ့ဝါဒကိုခေါ်ဘုရားမဲ့ဝါဒ၏အကျဉ်းမျိုး, ကရှိတယ်။ ဒီအမျိုးအစားနှင့်တကွ, ဘုရားမဲ့ဝါဒီအတိအလင်းတစ်ချိန်ချိန်ထောက်ခံမှုထိုက်တံ့သောအားကြီးသောပြောဆိုချက်ကိုအောင်မည်သည့်နတ်ဘုရားတို့၏တည်ရှိမှုငြင်းပယ်ထားပါတယ်။ တချို့ကဘုရားမဲ့ဝါဒီဤအမှုကိုနှင့်အခြားသူများကိုအခြားသူများနှင့်အတူအချို့သောတိကျတဲ့တပါးသောဘုရားတို့နှင့် ပတ်သက်. ဤသို့ပြုပေမယ်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်လူတစ်ဦးတဦးတည်းဘုရားအတွက်ယုံကြည်ချက်ကင်းမဲ့ပေမယ့်အခြားဘုရားများ၏တည်ရှိမှုကိုငြင်းဆိုလိမ့်မည်။
အောက်တွင်ဘုရားမဲ့ဝါဒသတ်မှတ်မည်သို့နားလည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒီကြောင့်သူတို့လုပ်ပေးလမ်းကို define ကိုကူညီညွှန်းဆိုစာမျက်နှာများအမျိုးမျိုးမှလင့်များဖြစ်ကြသည်။
က "ခိုင်မာတဲ့" နှင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒ၏ "အားနည်း" အာရုံ၏ရှင်းပြချက်ကိုအဘယျကွောငျ့အဆုံးစွန်သော, အားနည်းဘုရားမဲ့ဝါဒ , ကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာအတွက်ကျယ်ပြန့်ကလျှောက်ထားသည်ကိုမည်ကဲ့သို့အတွက်ဘုံနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတွေ့ဆုံရန်အများစုကဘုရားမဲ့ဝါဒီဖြစ်ကောင်းအားနည်းဘုရားမဲ့ဝါဒီမဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့ဘုရားမဲ့ဝါဒီဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘုရားမဲ့ဝါဒ, theism, သတ်မှတ်ကြပုံကိုစံအဘိဓါနျမှာတစ်ဦးကကြည့် agnosticism နှင့်အခြားဆက်စပ်အသုံးအနှုန်းများ။ နှိမ့်ချခေတ်သစ်အောက်စဖို့အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန်မှတစ်ဆင့် 20 ရာစုအစောပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အဘိဓါနျကနေအဓိပ္ပာယ်များမှာပါဝင်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဘုရားမဲ့ဝါဒဆွေးနွေး အွန်လိုင်းအသုံးပြုသောအသုံးအများဆုံးအရင်းအမြစ်များကိုတဦးဖြစ်ကောင်းအမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းအဘိဓါနျဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤလူအပေါငျးတို့သမှာရှိသည်မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ် (ဥပမာ, သူတို့ကလက်ရှိအလုပ်ကနေပို့စ်တင် / ဖတ်နေနေကြတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့) ကိုချက်ချင်းဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ရသောပုံနှိပ်အဘိဓါနျမတူဘဲလူတိုင်းတန်းတူဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်ရသောကိုးကားဖြစ်ကြသည်။ ဒီတော့အဘယျသို့သောဤအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုဘုရားမဲ့ဝါဒ၏အဓိပ်ပါယျအကြောင်းကိုပြောပါရန်ရှိသည်သလဲ?
အထူးပြုရည်ညွှန်းအကျင့်ကိုကျင့်ကိုလည်းဘုရားမဲ့ဝါဒ, theism, agnosticism နှင့်အခြားဆက်စပ်အသုံးအနှုန်းများ၏အဓိပ္ပာယ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ လူမှုဗေဒအဘိဓါနျ, ဘာသာရေးစွယ်စုံကျမ်းနှင့်ထို့ထက် ပို. ထံမှ entries တွေကိုဒီမှာပါပါဝင်သည်။
ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့် freethinkers ရာစုနှစ်များစွာ၏အတိတ်စုံတွဲကျော်အတော်လေးတသမတ်တည်းဘုရားမဲ့ဝါဒသတ်မှတ်ကြသည်။ ပေမယ့်အနည်းငယ်ပိုပြီး "အားနည်း" နှင့် "ခိုင်မာတဲ့" ဘုရားမဲ့ဝါဒများအကြားမတူညီကြတစ်ခုတည်းကိုသာ "ခိုင်မာတဲ့" ဘုရားမဲ့ဝါဒ၏သဘောအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ 20 ရာစုအစောပိုင်းမှသည်နှင့်မရောက်မီ nonbelievers နှင့် freethinkers ထံမှဘုရားမဲ့ဝါဒ၏အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာပါပါဝင်သည်။
အနည်းငယ်ခေတ်သစ်ဘုရားမဲ့ဝါဒီလည်း "ခိုင်မာတဲ့" ဘုရားမဲ့ဝါဒ၏ရုံအသိမှဘုရားမဲ့ဝါဒကန့်သတ်အပေါ်အခိုင်အမာကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်အများဆုံးရှိသည်မဟုတ်။ အများစုမှာအစား, ယခင်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးလေ့ဘုရားမဲ့ဝါဒ၏ပုံစံကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းငြင်းခုံ, "အားနည်း" ဘုရားမဲ့ဝါဒနှင့် "ခိုင်မာတဲ့" ဘုရားမဲ့ဝါဒများအကြားခြားနားချက်ကိုထုတ်ထောက်ပြကြသည်။
နောက်ပိုင်းမှာကိုးကားနှင့်အဓိပ္ပာယ် nonbelievers ကနေ 20 ရာစုနှောငျးပိုငျးကနေဒီမှာများမှာပါဝင်သည်။
ဘုရားမဲ့ဝါဒ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့် ပတ်သက်. နားလည်မှုလွဲမှားခြင်း theists ကနေလာတော်မှာကြပေမယ့်, ကအများအပြား theists ဘုရားမဲ့ဝါဒရိုးရှင်းစွာထက်ကျယ်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုကြတဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည် "ဘုရားသခငျ၏ဖြစ်တည်မှု၏ငြင်းပယ်။ " သူတို့ထဲကအနည်းငယ်ကနေကိုးကားဒီမှာပါပါဝင်သည်။
ဒါဟာသည်းမခံ Be ဖို့ဘာဆိုလိုသနညျး
ဖြစ်တည်မှုအနှစ်သာရ Precedes: ဖြစ်တည်မှုအတွေးအခေါ်
ဘုရားမဲ့ဝါဒီများအတွက်ရှိပါတယ် non-ဘာသာရေးမင်္ဂလာဆောင် Options ကိုဖြစ်ပါသလား
ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် Arguments အတွက်အားနည်းချက်တွေကို: တစ်မေးခွန်းနှင့်အတူတစ်မေးခွန်းဖြေဆိုခြင်း
CS Lewis ကနှင့် JRR စာရေးသူ JRR Tolkien ခရစ်ယာန်ဓမ္မကျော်စောဒကတက်အဘယ်ကြောင့်
ဒါဟာ CE နဲ့ဘီစီသို့မဟုတ်အေဒီနှင့်ဘီစီကိုအသုံးပြုနည်း သာ. ကောင်း၏လား?
ပန်းချီ Techniques: Two-အရောင်လျှော် Variegated ကိုလျှော်
ဂေါက်ကွင်းအတွက်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန (Inertia ၏ Moment) ဆိုတာဘာလဲ
Quotes တွင် Sir Donald Bradman
သင်သိပါဖို့လို 10 Denver Rapper
အားလုံးဥ-and Dart နျ Classical တန်ဆာဆင်အကြောင်း
ကျင့်ဝတ်: စစ်ပွဲအကျင့်ယိုယွင်းခြင်းနှင့်မှန်သမျှ Is ကြောင်း Antiwar Arguments
စပိန်အတွက် '' Malo, '' တှကေအသငျ့ 'နှင့်ဆက်စပ်စကားအသုံးပြုခြင်း
စစ်အေးတိုက်ပွဲ: သင်္ဘော USS ကို Nautilus (SSN-571)
ရှင်ဇိုအာဘေးလင်ကွန်းနှင့်သူ၏ပုဆိန်: အဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအနောက်ကွယ်မှာ Reality
ဂရန်း bargain ကဘာလဲ?
ခရစ်စမတ်မတိုင်မှီ '' Twas အဆိုပါည: နားလညျမှု Reading
High School တွင်ကျောင်းသားများအဘို့ကြီးသောနွေရာသီသိပ္ပံ Programs ကို
ပလတ်စတစ် Ping-Pong ဘောလုံးဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ
3 အဖြစ်များသည့်စက်မှုဆီ Pump ပြဿနာများ
ပုံဆောငျ Interaction သီအိုရီနှင့်အတူလူမျိုးနှင့်ကျားလေ့လာနေ